Banky iraisam-pirenena: “Ilaina mivory miaraka, mitady vahaolana izao tontolo izao” | NewsMada
Banky iraisam-pirenena: “Ilaina mivory miaraka, mitady vahaolana izao tontolo izao”
Voadona ara-toekarena daholo ny faritra maneran-tany noho ny valanaretina Covid-19, araka ny tatitra navoakan’ny Banky iraisam-pirenena. Betsaka ny seha-pihariana natsahatra mahakasika ny famokarana, nampitotongana ny toekarena maneran-tany. Hatramin’ny taona 1870, ny krizy nentin’ny Covid-19 amina firenena maro no mafy indrindra, niantefa tamin’ny isam-batan’olona.
Amina endrika samihafa nisehoany sy mbola isehoan’ny krizy, hatramin’izao. Raha fintinina dia marefo ny asa fihariana amin’ny ankapobeny. “Betsaka ary maharitra ny takaitra apetraky ny Covid-19, lasa olana goavana maneran-tany”, hoy i Ceyla Pazarbasioglu, ao amin’ny Banky iraisam-pirenena. “Laharam-pahamehana voalohany ny fiatrehana ny hamehana ara-pahasalamana sy ny toekarena. Ilaina mivory miaraka izao tontolo izao mitady vahaolana hanarenana faran’izay haingana ny toekarena, miady amin’ny fahantrana sy ny tsy fananan’asa mahazo vahana”.
Tamin’ny taona 2020, nihena 7 % ny fihodin’ny toekarena any amin’ireo tany mandroso
(6,1 % tany Etazonia, 9,1% tany Eoropa, 6,1 % tany Japana), noho ny olana samihafa teo amin’ny tolotra sy ny tinady, ny fifanakalozana. Vao mainka nampitombo ny fahantran’ny mponina ny fihariankarena tsy nihodina any amin’ny tany hafa. Ireo miankin-doha hatramin’izay amin’ny varotra ivelany, indrindra ny mpanondrana entana ; miantehitra amin’ny famatsiam-bola ; miandry mpizahantany. Ireo tany lazaina an-dalam-pandrosoana no voakasik’izany, toa an’i Madagasikara.
Mety hihemotra 8 % amin’ity taona ity
Heverina amin’ity taona ity, hiakatra 3,9 % ny tahan’ny harinkarena any amin’ny tany matanjaka ; 4,6 % amin’ny tany an-dalam-pandrosoana, anisan’izany eto Madagasikara. Tokony hihena ny fihanaky ny valanaretina, tsy hisy fiantraikany firy eo amin’ny asa fihariana. Mety hiova anefa ny tombantombana, ravan’ny fihanaky ny tsimokaretina maharitra, mamparefo ny varotra maneran-tany, sns. Raha kajina amin’ny lafiny ratsy izay, mety hihemotra tampoka 8 % amin’ity taona ity ; raha misy ny fisondrotany, 1 % monja.